Ny rakitsoratry ny haino aman-jery Bitcentral dia manampy ireo mpamorona ny votoaty hitantara bebe kokoa momba ny tantara | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny alàlan'ny haino aman-jery Bitcentral dia manampy ny mpamorona atiny hitantara tantara misarika bebe kokoa
Ny alàlan'ny haino aman-jery Bitcentral dia manampy ny mpamorona atiny hitantara tantara misarika bebe kokoa
Ao amin'ny tontolon'ny haino aman-jery nomerika, mitombo ny filàna afa-po, ary ny fitantanana azy dia mihamahazo vahana hatrany. Mitombo avo roa heny ho an'ny mpamorona ny votoaty izay miezaka tsy amin'ny fitantarany ireo tantara mahaliana indrindra fa amin'ny fahazoana mpihaino mifanaraka amin'ny hafatra lehibe amin'ny marika ihany koa. Bitcentral dia manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny fizotran'ny haino aman-jery sy ny vahaolana namboarina izay manampy ny atiny horonantsary hahatratra ny lanjanany ambony indrindra. Raha ny marina, maro amin'ireo vokatra avy amin'ny orinasa no voaporofo fa mahomby indrindra rehefa manampy ny mpamorona atiny amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo amin'ny famoronana tsy mampino raha tsy ny famoahana maso ny atiny video.
Nandritra ny roa taona mahery, Bitcentral dia nanolotra ny fivezivezena haino aman-jery mahomby sy vahaolana namboarina ho an'ireo fampielezam-peo izay te-hanatsara ny lanjan'ireo atiny video. Vahaolana Core News an'ny orinasa ity dia ny sehatra famokarana vaovao No. 1 any Etazonia, mahatratra an-tapitrisany isan'andro. Vahaolana iray hafa, Ny fanaraha-maso afovoany dia manome fitaovana mora ampiasaina ho an'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso amin'ny tompona modules amin'ny fanatanterahana ireo dingana rehetra miovaova ho playout. solika, dia Bitcentral ny Linear momba ny fanovana farany indrindra sy fanovana ny indostria.
Mihoatra ny 1,000 XNUMX ny fandefasana fampielezana eran-tany Bitcentral ny famoam-baovao sy rindrambaiko automatique fanaraha-maso. Ary miaraka amin'ny fanampian'i solika, izy ireo izao dia mahay mametraka sy manolotra votoaty manokana manerana ny sehatra nomerika toa ny OTT, web, apps, fitaovana finday, ary koa ny media sosialy sy ny syndication.
Marobe BitcentralAnisan'ireo vahaolana manasongadina ny:
Master Control & Automation
BitcentralLisitry ny vokatra
Nanomboka ny taona 2000 sy taorian'izay, Bitcentral dia nanaporofo fa orinasa mpamorona rindrambaiko manana fahaiza-manao amin'ny famolavolana vokatra izay manampy ny matihanina amin'ny fampielezam-peo hitantana bebe kokoa ireo lakan-trano ao ambadiky ny votoatiny. Ny sasany amin'ireo vokatra ireo dia:
Ny fanaraha-maso afovoany
Bitcentral ny Prism miasa amin'ny sehatra NRCS malefaka miaraka amin'ny fahaizana mampifandray ny mpanao gazety, ny mpamokatra ary ny talen'ny tantara tokony hotantaraina. Ity sehatra ity dia ahafahan'ny fiaraha-miasa ao amin'ny efitrano vaovao mandritra ny dingan'ny famokarana. Ary ity fiaraha-miasa ity dia misy ny famoahana atiny mihoatra ny tsy fankasitrahan'ny mpijery nentin-drazana ny tranonkala sy ny media sosialy. Ny maritrano marefo ao aorina Prism ahafahan'ny mpanjifan'ny anatiny miditra ao amin'ny efitrano fampahalalam-baovao sy amin'ny fifandraisana WAN manampy amin'ny tantara arak'izany. Prism atolotra amin'ny sehatra modular, ary ny fampiasa azy dia mora ampiasaina hatrany hamahana ireo ahiahy amin'ny fivoaran'ny gazety.
Mianara bebe kokoa momba ny Prism amin'ny alalan'ny fitsidihana bitcentral.com / vokatra / Prism /.
Bitcentral ny Oasis rafitra fitantanana orinasa miasa toy ny rafitra famindrana rakitra azo antoka izay ahafahan'ny mpampiasa mandray anjara amin'ny solosaina finday, takelaka ary fitaovana finday mba hilazana ireo tantara tena mahaliana sy manery azy. Ny tombontsoa lehibe amin'ny Oasis dia avy amin'ny fangatahana fandaharan'asa fananganana kalitao avo lenta, izay mbola tsy dia mahery setra izany, ary niafara tamin'ny famoronana sy fizarana tantara mahaliana kokoa noho ny teo aloha. The Oasis rafitra fitantanana orinasa nozaraina am-pahatokiana manerana ireo tobim-pahefana rehetra nahazo alalana ary azon'ny mpisera eny an-tsaha ihany koa amin'ny fampidinana na famoahana votoaty ho fanampiana ao amin'ny famokarana tantara lavitra.
Mianara bebe kokoa momba an'i Oasis amin'ny famangiana bitcentral.com / vokatra / lonaka /? utm_source = nabweb.
Bitcentral ny multipath dia natao manokana ho mody fanatsarana Oasis MAM. MultiPath ny miaraka amina rafitra fizarana nomerika BitcentralFitaovana feno ny fitaovana famokarana vaovao, izay ahafahan'ny sehatra an-gazety mitombo noho ny fenitra mahazatra. Bitcentral ny multipath mamela ny zava-drehetra atambatra ao anaty module iray izay manome fomba fijery feno momba ny fizotry ny famoahana haino aman-jery. Taorian'ny nahavitana hetsika famoahana dia nisy ny interface tsara namboarina sy intuitive izay mitarika ny mpampiasa amin'ny fisafidianana sy fitantanana ireo hetsika famoahana famoahana marobe, mikendry ny kaonty OVP's, CMS ary media sosialy.
Mianara mifototra bebe kokoa Bitcentral ny MultiPath amin'ny fitsidihana bitcentral.com / vokatra / multipath /.
Ny fanaraha-maso afovoany dia rindrambaiko fanaraha-maso feno sy feno ary mifehy tanteraka. Manome fitaovana maodely ho an'ny famolavolana modely izay manatanteraka ny fizotrany rehetra izay mivadika ho lalao filalaovana izay mandefitra ny ezak'ireo mpandraharaha nefa tsy manimba ny fampiasana azy mora foana. Ity rindrambaiko ity dia manome fantsom-pifandraisana feno ho an'ny mpampiasa, ary ao anatin'izany ny fampidirana ny fifamoivoizana, ny fananana haino aman-jery na ny fitehirizana fitehirizana, ny fandaharam-potoana amin'ny lisitry ny lisitra an-tserasera, ny fanaovana katalaogin'ny programa, ny fanitsiana / ny fanovana ny haino aman-jery, ny fanaraha-maso sy ny tatitra momba ny rafitra, ny fanodinana atiny syndicated ary ny firaketana feed automated. Amin'ny ankapobeny dia lalana miasa mahomby kokoa ho an'ny fampielezam-peo no ampiasaina.
Mianara bebe kokoa momba ny Central Control amin'ny fitsidihana bitcentral.com / vokatra / afovoany-tena /? utm_source = nabweb.
Miverina any solika, io vahaolana niomerika sy famandrihana monetization io dia manana faharetan'ny fotoana lava indrindra ao amin'ny tsena. Miteraka folo hakiviana ny doka ho an'ny tompona mpihaino, mpamatsy atiny ary mpanao dokam-barotra. Ary tsy misy sehatra hafa mampihetsi-po hafa mampandeha ambadika, fanandramana mampihetsi-po mitovy aminy amin'ny solika, izay manome hery ireo fantsona mavitrika amin'ny sehatra miorina amin'ny rahona misy endrika izay tafiditra ao amin'ny fandrosoana, fisokafana mangatsiaka, ny fahafahany mampiditra votoaty mivantana, ary tsy misy ireo horonan-taratasy izay mampivily ny mpijery. Ny vahaolana dia tsy voakasik'ireo mpanakan-doka ireo doka, ary ampidirina am-pilaminana ao anaty votoaty marika tsy manam-paharoa izay ankafizin'ny mpijery mijery na inona na inona fotoana sy toerana ary manerana ny sehatra rehetra.
Mianara bebe kokoa momba ny FUEL amin'ny fitsidihana bitcentral.com / vokatra / solika /.
Maninona no tokony aleha amin'ny fampielezam-baovao Bitcentral
Izay matihanina mpitazam-peo dia afaka mamorona renirano mahavariana sy manaitra sary. Ny dingana manaraka dia ny fitantanana ny arofanina toy ny fitakiana votoaty, ary ny orinasa rindrambaiko malaza Bitcentral afaka manampy amin'izany. Na ny vokatra na ny vahaolana entin'izy ireo, ny atin'ny horonantsary noforonin'ny matihanina amin'ny fampielezam-peo dia manana ny zavatra rehetra azo raisina raha ny fahaizana manokana no jerena Bitcentral ary fandraisana anjara amin'ny sehatra niomerika tokoa ny indostrian'ny fampielezam-peo mandroso sy mivelatra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Bitcentraldia tsidiho ny bitcentral.com /
Bitcentral fampitana injeniera fampitana orinasa Central Control ™ afa-po mpamorona votoaty Vahaolana vahaolana Core News ™ vahaolana namboarina Digital Media system transfer file solika Lalana amin'ny fangatahana automatique fanaraha-maso master Miasa amin'ny media multipath Sehatra NRCS Oasis rafitra fitantanana orinasa Prism famokarana tantara lavitra media sosialy sy ny syndication 2020-05-08
Previous: Video Editor
Next: PSA Shot "Newest Home" a ProBalance ary voarindra miaraka amin'ny fakantsary mainty Blackmagic ary DaVinci namaha